Garoonka diyaaradaha Dayniile oo u xiran siyaasad qaladan oo ay u soo adeegsadeen isbaheysiga la dagaalanka wadaadada
Garoonka Diyaaradaha Dayniile oo magaalada Muqdisho u ahaa garoonka ay inta badan adeegsadaan ayaa xirmay kadib markii maamulkiisu uu ka leexday habkii uu magaca weyn ku yeeshay oo ahaa inuu dhexdhexaad ka ahaado siyaasadaha iska soo horjeeda ee ka taagan magaalada Muqdisho.
Garoonka weyn ee diyaaradaha iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa u xiran arrimo la xiriira dhinaca siyaasadaha beelaha kadib markii uu dagaal dhexmaray kooxaha hubeysan ee kala degen waqooyiga iyo koofurta Muqdisho. Arrintaas waxey fursad u noqotay garoonka Dayniile oo muujiyey dhaqan miisaaman, kaas oo soo jiitey heyadaha shisheeyaha, ganacsatada, iyo inta badan dadweynaha degan Muqdisho.
Garoonka Dayniile waxaa kalsoonida uu ka heystey dadka dhaawacay markii uu xaruun u noqday isbaheysatada la dagaalama wadaadada, kuwaas oo nidaam calooshi u shaqeysatanimo ah ugu adeegaya wadamada shisheeyaha ee loo dhoofiyo wadaadada, arrintaas oo soo xasuusisay dadweynaha Muqdisho dhacdooyinkii lagu xiray garoonka weyn ee Muqdisho iyo tacadiyada uu gelayo xaafiiska gobolka Bari uga furan la dagaalanka argagixisada oo ay ku shaqeystaan koox calooshooda la ciyaara oo Mareykanka iyo Itoobiya u gacan geliya dad masaakiina oo ay soo afduubeen, kuwaas oo ka kala koobnaa macalimiin dugsi quraan, kuwo ka adima masaajidyada, arday xer ah, iyo shiikhyada fasira diinta.
Dad badan waxey qaadan waayeen ishaas dhaqaale ee u furantay magaalada Muqdisho in si aan laga fiirsan oo qaldan in loo adeegsaday, dhibaatada arrintaas ka dhalateyna ay ku dhacday dadweynaha jecel walaaltinimada, kuwaas oo kawada kooban dhamaan rayidka degan Muqdisho.
Waxaa lagama maarmaan ah in dib loo soo celiyo adeegii ay ku qanacsanayeen shisheeyaha iyo dadweynaha degan Muqdisho oo ay si kalsooni leh uga heli jireen garoonka diyaaradaha Dayniile, kaas oo ugu shaqeynayey si walaaltinimo leh, macaamiishiisana si dhexdhexaadnimo leh ugu fidinayey daryeel xurmad leh.
Xoog iyo siyaasad beeleed wax ku maamulideedu waxey wax ka qaban lahayd dekeda iyo garoonka weyn ee magaalada Muqdisho oo u xiran ismaandhaaf siyaasad qabiil. Garoonka Dayniile waa in maamulkiisa lagu soo celiyo nidaamka furan ee ganacsiga, lagana madaxbanaaneeyo siyaasadaha la xiriira isbaheysiga oo ka shaqeynaya xoog iyo dagaal in dadka walaalaha dhaqaalahooda lagu burburiyo. Awood sheegasho meel ugama banaana nidaamka ganacsiga, gaar ahaan kuwa la xiriira duulista hawada oo halis u ah in si fudud loogu waxyeeleeyo gadiidka circa iyo rakaabka saran.
Dhaqaalaha Dayniile ka soo gelayey duulimaadyada cirka waxey ahayd sharaf iyo maaliyad ay ku noolaayeen dad badan oo degan Xamar. Garoonka Dayniile oo aan hadda u xirneyn arrimo la xiriira xoog, waa inuusan marin jidkii uu ku xirmay garoonka weyn oo Xamar, kaas oo sabab looga dhigay arrimo siyaasadeed oo aysan muuqan qaab loo xalin karo.
Garoonka Dayniil oo ah mid maamulkiisa loo daayey dadka ku nool degaankaas ayaa dadka intiisa badan waxey ka sugayaan inuu dib ugu soo laabto hanaan furan oo qanciya dadweynaha ku xiran adeegsigiisa, taas oo la filayo iney ku imaan karto haddii maamulka garoonka iyo siyaasada isbaheysaga la kala saaro, lana kala madax banaaneeyo ganacsiga iyo siyaasada.